उपाध्यायको नयाँ गीत ‘जिन्दगीका अनेक…’ सार्वजनिक (भिडियोसहित) - Pura Samachar
उपाध्यायको नयाँ गीत ‘जिन्दगीका अनेक…’ सार्वजनिक (भिडियोसहित)
विश्व कीर्तिमानी गीतकार डा. डीआर उपाध्यायको नयाँ गीत ‘जिन्दगीका अनेक…’ सार्वजनिक भएको छ । सागर अधिकारी ‘शरद’को स्वर र सङ्गीत तथा देवेन्द्र नेवाःको सङ्गीत संयोजन रहेको गीतको लिरिकल भिडियो सार्वजनिक भएको हो ।
‘जिन्दगीका अनेक रुपरङ् समेट्दै
हरमन मुटुमा बेग्लै तरङ्ग छेड्दै…’ सार्वजनिक गीतमा नेपालमा प्रकाशित धेरै भन्दा धेरै उपन्यासको नाम लिइएको छ । डा. उपाध्यायको केही समय अघि सार्वजनिक एल्बम ‘धरोहर’मा रहेको यो गीतले पनि कीर्तिमानी कायम गर्न सफल भएको थियो ।